(tonga teto avy amin'ny Hieronimo avy any Stridona)
Anarana Jerôma avy any Stridona
Teraka Tokony 342
Maty 30 Septambra 420
I Jerôma avy any Stridona na Hieronimo avy any Stridona na Masindahy Jerôma dia mpanoratra mizaka ny zom-pirenen'i Roma Taloha teraka tamin'ny taona 342 ary maty ny 30 Septambra 420. Isan'ireo Rain'ny Fiangonana na Aban'ny Eglizy manampahaizana momba ny Baiboly. Izy no nandika ny Baiboly amin'ny teny latina atao hoe Volgata (latina: Vulgata). Amin'ny teny latina dia atao hoe Eusebius Hieronymus izy.
Taorian'ny fianarana nataony tao Roma dia nitoka-monina tany an-tany efitra izy dia nanao fiainana mikatsaka ny fahafahan’ny fanahy amin’ny alalan'ny fampijalian-tena, sady tany izy no nanohy ny fandalinana ny Soratra Masina. Tamin'ny taona 379 izy dia nohamasinina ho pretra. Nandany telo taona tao Konstantiniopolisy niaraka tamin'i Gregorio avy any Nazianzo, izay isan’ny "rain'ny Fiangonana" taty aoriana, izy avy eo.
Tamin’ny taona 382 izy dia nody any Roma ka nisahana ny asa fitanana an-tsoratry ny papa Damaso I. Nandeha tany amin'ny Tany Masina izy tamin'ny taona 385. Niorim-ponenana tao Betlehema izy tamin’ny taona 386. Nanohy ny asa fanoratany tao i Hieronimo sady nanomboka niady hevitra tamin'ny mpanohana ny pelagianisma ary tamin'ny moanina teololiana Tiranio Rofino (na Rofino avy any Akoilea) sy tamin'ny Aogostino avy any Hipo, ilay isan'ny "mpampianatry ny Fiangonana" taty aoriana (Md Aogostino). Ny tsy fifanarahan-kevitra nifanoheran'ireo mpanohana ny pelagianisma dia nahatonga an'i Hieronimo hiafina nandritra ny roa taona teo ho eo. Maty izy fotoana vitsy taorian'ny fiverenany tao Betlehema tamin'ny taona 419 na 420.
↑ Ny pelagianisma dia mampianatra ny fananan’ny olombelona safidy malalaka sy ny tsy filàna ny fahasoavana sy ny fanavotana avy amin'Andriamanita.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerôma_avy_any_Stridona&oldid=978083"
Teraka tamin'ny taona 342
Maty tamin'ny taona 420
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2019 amin'ny 09:51 ity pejy ity.